विवाहपछिको सुखद् सम्बन्धको लागि प्रेमी–प्रेमीकाको बुझ्नु पर्ने बानीहरू !! | सुदुरपश्चिम खबर
तपाईं अक्सर सुन्नुहुन्छ कि प्रेम विवाह मागी विवाहको तुलनामा छोटो समयको लागि हुन्छ । विभिन्न अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी केसमा यो सत्य पनि देखिएको छ । अमेरिकामा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार ४० प्रतिशत प्रेम विवाह गरेका जोडीहरु विश्वास गर्छन् कि विवाहपछि प्रेमी वा प्रेमिकाको व्यवहार परिवर्तन हुन्छ । यदि तपाईं आफ्नोको पार्टनरले विवाहपछि कस्तो व्यवहार गर्छन् र तपाईंको विवाह सफल हुन्छ कि हुन्न भन्ने दुविधामा हुनुहुन्छ भने यसको लागि केही बानीहरुको बारेमा पहिले नै जानकारी पाउनु सहज हुन्छ ।
विवाहको बारेमा अलमल
यदि तपाईंको साथीसँग विवाहको कुरा गर्दा बेवास्ता गर्छन् र चिसो प्रतिक्रिया दिन्छन् भने यो एउटा संकेत हो कि तपाईंको साथी तपाईंसँग विवाहको लागि तयार छैन । यस्तो अवस्थामा यदि तपाईंको पार्टनरको समस्या परिवार र आफन्त हो भने दुवै मिलेर यस मामलाको समाधान खोज्छन् । तर प्रेम सम्बन्धमा यदि तपाईंको पार्टनरले तपाईंलाई अब प्रयोग मात्रै गरेर विवाहको कुरामा टाढा हुन्छ भने ऊसँग तपाईंको भविष्य राम्रो हुन सक्दैन ।
बारम्बार अवरोध र अनुगमन
यदि तपाईंको साथीले बारम्बार तपाईंको गतिविधिमा अनुगमन गरिरहेको छ भने त्यो पनि भविष्यको लागि हानिकारक हुन सक्छ । समय समयमा कल गरेर अवस्था बुझ्नु प्रेम देखाउने अवस्था पनि हुन सक्छ । तर कहाँ, किन, कोसँग जस्ता प्रश्न बारम्बार सोध्ने गर्दा यसले सम्बन्धमा असुरक्षित महसुस गरेको अवस्था छ भने यस्तो अवस्थामा भने विवाह धेरै समय नटिक्न सक्छ ।
सोच फरक छ भने
प्रायः मानिसहरूले साझेदारहरू आफू जस्तो छनौट गर्छन्। कहिलेकाँही दुवैको पेशा फरक हुन सक्छ । भाषा र चलन फरक हुन सक्छ तर तिनीहरूको सोच र विकल्पमा निश्चित रूपमा केही समानताहरू हुनेछन्। यदि तपाईंको पार्टनर बारम्बार तपाईंको मेकअप, कपडा, साथीहरु, आदिको बारेमा सोध्छन् भने यसमा कुनै असमझदारी हुन सक्छ । विवाह पछि त्यस्ता सम्बन्धहरूमा समस्या बढ्न सक्छ ।
साथी र आफन्तहरूको साथ समस्या
हामी साथीहरू छान्छौं तर हामी आफन्तहरूलाई छान्न सक्दैनौं। सामान्यतया, साथीहरू जसलाई तपाईं धेरै मन पराउनुहुन्छ र आफन्तहरू जो तपाईंलाई धेरै नजिकका छन् । यदि तपाईंको साथीलाई उनीहरूसँग समस्या छ भने यो समस्या विवाह पछि बढ्न सक्छ ।
गाली गर्नु वा रिस उठ्नु
यदि तपाईंकी प्रेमिका लगातार तपाईंको रूप, व्यवहार र चरित्रमा कमी देखाउँदै निन्दा गर्छिन् भने ढुक्क हुनुहोस् यो समस्या विवाहपछि पनि रोकिनेवाला छैन । त्यस्तै, कतिपयले राम्रा बानीमाथि पनि शंका गरेर यस्ता बानी सुधार गर्न आग्रह गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसले अर्को व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा असर गर्छ । जसले गर्दा सम्बन्धमा समस्या सिर्जना हुन्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)
सिन्धुपाल्चोकमा विज्ञ टोली जाँदै, बाढी मापनको उपकरण नहुँदा समस्या
सफल दाम्पत्य जीवनका लागि सतर्कता
तौल घटाउन खाली पेटमा बिहान ज्वानो पानी !!